သင့်ရဲ့အီးမေးလ်ကိုဖွင့်၊ Martech Zone
သင်၏အီးမေးလ်ကိုဖွင့်ရန်၊ ကလစ် နှိပ်၍ ကူးပြောင်းခြင်းနှုန်းကိုအမြင့်ဆုံးအောင်လုပ်ရန်လမ်းညွှန်
စနေနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 13, 2021 စနေနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 13, 2021 Douglas Karr
ဖောက်သည်များနှင့်အပတ်စဉ်ငါဆွေးနွေးခဲ့သည့်တစ်ခုမှာအောင်မြင်သောအီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့အတွက် ပို၍ စိတ်ပျက်စရာကောင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ရိုးရိုးလေးပြောရရင်သင်၏အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစာရင်းကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှသင်၏ပို့ဆောင်နိုင်မှုခေါင်းကိုက်ခြင်းကိုပါလုပ်ဆောင်ပါ။ အင်တာနက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများသည်အကောင်းဆုံးသောအလေ့အကျင့်ကောင်းများကိုရရှိစေမည့်မည်သည့်မျှော်လင့်ချက်ကိုမဆိုစွန့်လွှတ်ပြီးကောင်းမွန်သောပေးပို့သူများအားဆက်လက်အပြစ်ပေးသည့်စကားမပြောနိုင်သော algorithms များရှိနေသည်ဟုထင်ရသည်။
ဖြစ်ရပ်တစ်ခုအနေဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်၏စက်မှုလုပ်ငန်းမှလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး က Yahoo ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ မိမိပလက်ဖောင်းတိုင်းလိုက်နာနေသော်လည်းသူ၏အီးမေးလ် ၁၀၀% ကိုပိတ်ဆို့ခြင်း စက်မှုလုပ်ငန်းစံနှင့်အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့် Yahoo ကစာရင်းသွင်း! စာပို့။ စမ်းသပ်မှုတစ်ခုအနေနှင့်သူ၏စာပို့ခြင်းကို IP လိပ်စာအသစ်သို့ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ပြီးသူ၏အီးမေးလ်များမှာပြissueနာမရှိဘဲဖြတ်သန်းသွားသည်။ တူညီတဲ့အကြောင်းအရာ, တူညီသောစာရင်းပေးသွင်းထားသူတစ် ဦး ကွဲပြားခြားနား IP address ကို။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ISP များသည်ကုမ္ပဏီ၏တုန့်ပြန်မှုရှိ၊ မရှိကိုစစ်ဆေးရန် IP လိပ်စာများကိုကျပန်းပိတ်ပင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံး Yahoo! အီးမေးလ်များကိုမူငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ သို့သော်အခြားသော ISP များက၎င်းတို့မသိသော junk folder သို့ပို့သူထံသို့ပို့သည်။
သင်တန်း၏, ရှိပါတယ် အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအမှားများ သင်၏စာရင်းနှင့်အကြောင်းအရာကိုဖန်တီးစဉ်သင်ရှောင်ရှားနိုင်သည်။ အီးမေးလ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်နည်းလမ်းများစွာရှိပါသည်။ ဒီအချက်အလက်တွေ၊ အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပိုကောင်းအောင် Hacks & ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှုများ99Firms မှအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ ငါအသုံးအနှုန်း၏ကြီးမားသောပန်ကာမဟုတ်ပါဘူး hack က... ဒီနည်းလမ်းတွေအားလုံးသည်သင်၏အီးမေးလ်ပရိုဂရမ်နှင့်စမ်းသပ်ရန်ထိုက်တန်ကြောင်းကျွန်ုပ်တွေ့ရှိသည်။
အီးမေးလ် Optimization နည်းလမ်းများပါဝင်သည်
ဘာသာရပ်လိုင်း Optimization - Algorithms နှင့်သုံးစွဲသူများ၏အပြုအမူသည်အကြောင်းအရာအားလိုင်းတစ်ခုအားအီးမေးလ်ကိုဝှက်ထားခြင်း (သို့) နှိပ်ခြင်းဖြင့်အရေးအကြီးဆုံးသောအရာဖြစ်စေသည်။ ကုမ္ပဏီအတော်များများလည်းပါ ၀ င်နေတယ် ရုပ်ပြောင် အဖြစ်ကောင်းစွာ။
Preheader စာသား ကျွန်ုပ်တို့၏ static newsletter preheader text ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ newsletter content မှတည်ဆောက်ထားသော dynamic text နှင့်အစားထိုးသောအခါ inbox နေရာချထားမှုနှင့်နှုန်းထားများချက်ချင်းတိုးတက်လာသည်ကိုတွေ့ရသည်။ လူများသည် previews များကိုဖတ်ကြသည် - ထိုအရာ၏အားသာချက်ကိုယူပါ။
ပို့သူအမည် - ၆၈% သောအမေရိကန်များသည်မိမိတို့မြင်သော“ From Name” ကို အခြေခံ၍ အီးမေးလ်ကိုဖွင့်ကြသည်။ သင်၏အမည်မှသင်၏အမည်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီကိုကောင်းစွာကိုယ်စားပြုပါသလား။ သင့်ရဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာနဲ့ကိုက်ညီပါသလား
segment - သင်၏အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစာရင်းကိုခွဲခြားခြင်းနှင့်အကြောင်းအရာများကိုပစ်မှတ်ထားခြင်းတို့သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောရလဒ်များကိုမောင်းနှင်သော်လည်းရှုပ်ထွေးမှုကြောင့်မကြာခဏသတိမမူမိခြင်း။ ၎င်းသည်ကြိုးစားရကျိုးနပ်ပြီးအီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပလက်ဖောင်းအများစုက၎င်းကိုထောက်ခံသည်။
personalization - ကျော်ပြီးသွားပါ။ သင်၏အမည်ပေးသူနှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်နှင့်ဝယ်ယူမှုသမိုင်းအတွက်တိကျသောသင်၏အီးမေးလ်လှုံ့ဆော်မှုတွင်အသေးစိတ်ဖော်ပြပါ။ အီးမေးလ်ပို့သူများက ၀ င်ငွေ ၉၂% တိုးလာပြီးအီးမေးလ်များကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်သည့်အခါနှစ်ဆပြောင်းလဲမှုနှုန်းကိုနှစ်ဆတိုးလာသည်။
အလိုအလျောက်နှင့်အစပျိုး - အချိန်ကိုက်ခြင်းသည်အရာအားလုံးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ဆက်ဆံရေးကိုရှေ့သို့တိုးရန်သင်၏အလားအလာ (သို့) ဖောက်သည်၏ပြုမူဆောင်ရွက်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ အီးမေးလ်တစ်စောင်လက်ခံရရှိရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
ခလုတ်များနှင့်ခေါ်ဆိုရန်လုပ်ဆောင်မှု - အကယ်၍ သင်သည်သင်၏အီးမေးလ်ကိုမူလစာမျက်နှာအဖြစ်ဖော်ပြပါကသင်၏အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ဆက်ဆံရာတွင်နောက်တစ်ဆင့်သို့ခေါ်ဆိုသူအားမောင်းနှင်ရန်ခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုရှိပါသလား။ မရရှိလျှင်သင်၏အီးမေးလ်ကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ရန်အခွင့်အလမ်းကြီးမားသည်။
images ကို - Inbox တွေဟာအလုပ်များနေတယ်၊ ​​ဒါကြောင့်သင့်အီးမေးလ်ထဲမှာရေးထားတဲ့ဂရုစိုက်ထားတဲ့စကားလုံးတိုင်းကိုစာရင်းပေးသွင်းသူတစ်ယောက်ကမျှော်လင့်ထားမှာမဟုတ်ဘူး။ အသုံးပြုသူကိုစာဖတ်ရန်နှင့်ကလစ်လုပ်ရန်ဆွဲဆောင်ရန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောပုံရိပ်များကိုထောက်ပံ့ပေးခြင်းဖြင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းနှင့်ကလစ်နှိပ်ခြင်းတို့ကိုတိုးမြှင့်ပါ။ အသွင်အချို့ထည့်ရန်ကာတွန်း GIF များကိုထည့်ပါ။
ဗီဒီယို - အီးမေးလ်ပလက်ဖောင်းများစွာသည်ဗွီဒီယိုကိုအပြည့်အဝမပံ့ပိုးနိုင်သော်လည်းအနည်းဆုံးသင့်အားဗွီဒီယိုတစ်ခုအားကစားခလုတ်တစ်ခုဖြင့်ပေးနိုင်ပါသည်။ စာရင်းပေးသွင်းထားသူသည် play ခလုတ်ကိုနှိပ်သောအခါ၎င်းတို့အတွက်ဗွီဒီယိုကိုအလိုအလျောက်စတင်စေသောစာမျက်နှာသို့ယူဆောင်ပါ။
ပျောက်ဆုံးခြင်းကိုကြောက်ခြင်း (FOMO) - သင်၏အီးမေးလ်များနှင့် ပတ်သတ်၍ အရေးတကြီးသဘောထားကိုဖန်တီးခြင်းသည်ပွင့်လင်းသောနှုန်းထားများနှင့်ပြောင်းလဲမှုနှုန်းကိုသိသိသာသာမောင်းနှင်နိုင်သည်။ ကမ်းလှမ်းချက်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သက်တမ်းကုန်ဆုံးမယ့်အကြောင်းရင်းကိုအိမ်ပြန်မောင်းဖို့ countdown animation တွေကိုထည့်သွင်းရတာကိုကျွန်တော်နှစ်သက်ပါတယ်။
အချိန်ကိုက် - မေ့လိုက်ပါ ပေးပို့ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန် အနတ္တ။ သင်၏အီးမေးလ်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောပေးပို့ချိန်များကိုစစ်ဆေးပြီး၎င်းသည်အကြီးမားဆုံးခြားနားမှုကိုပြုလုပ်သည့်အခါ၎င်းကိုပို့ပါ။ သင်သည်အချိန်အပိုင်းအခြားများအပေါ် အခြေခံ၍ segment နှင့် send များကိုပေးပို့လိုသည်။
မိုဘိုင်းတုံ့ပြန်မှု - ဖွင့်လှစ်ထားသောအီးမေးလ်အားလုံး၏ ၄၂% သည်မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်ပေါ်ပေါက်သည်။ မိုဘိုင်းကိရိယာပေါ်တွင်မည်သို့ကြည့်သည်ကိုကြည့်ရန်အီးမေးလ်ကိုသင်စစ်ဆေးပြီးပြီလား။ ညံ့ဖျင်းသောမိုဘိုင်းအီးမေးလ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသင်အံ့အားသင့်သွားနိုင်သည်။
အီးမေးလ်အကြောင်းအရာ - စာဖတ်သူအဆင့်နှင့်မိတ္တူအတိုသည်သင်၏နှိပ်ခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။
အီးမေးလ် format နဲ့ - တုန့်ပြန်ချက်ခြားနားချက်ကိုသိရန် HTML အီးမေးလ်တစ်ခုထက်စာတိုအီးမေးလ်ပို့ရန်ကြိုးစားဖူးပါသလား။ HTML အီးမေးလ်များသည်လှပသော်ငြားလည်း၎င်းတို့သည်စာသားအီးမေးလ်တစ်ခု၏အာရုံကိုမရပေ။
Tags: ပေးပို့ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်အီးမေးလ်အလိုအလျောက်အီးမေးလ်ခလုတ်များလုပ်ဆောင်ချက်အီးမေးလ်အီးမေးလ်အကြောင်းအရာအီးမေးလ် format နဲ့အီးမေးလ်ပုံရိပ်တွေအီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်အီးမေးလ်ပိုကောင်းအောင်အီးမေးလ်အီးမေးလ် preheaderအီးမေးလ်အပိုင်းအီးမေးလ်ပို့အကြိမ်အီးမေးလ်ပို့သည်အီးမေးလ်ကိုစာသားအီးမေးလ်ပေါ်လာသည်အီးမေးလ်ဗီဒီယိုထွက်ပျောက်ဆုံးကိုကွောကျရှံ့fomoနာမည်ကနေhtml အီးမေးလ်သတင်းလွှာoptimizationရိုးရိုးစာသားအီးမေးလ်preheader စာသားပို့သူအမည်ဘာသာရပ်လိုင်းစမ်းသပ်ခြင်း
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကင်ပိန်းစီမံကိန်းစစ်ဆေးရမည့်စာရင်း - အဆင့် ၁၀ ထက်သာလွန်သောရလဒ်များ
SEOReseller: White Label SEO Platform, Reporting and Agencies for Services